Home || Online Tahalka सम्पुर्ण पत्रपत्रिका २०७५ साउन १६
आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय : 'चुड्कीले आउँदैन सुशान'
दुईतिहाई बहुमतिसहितको सरकार । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका नेताले दाबी गरेको र विपक्षीले आरोप लगाउने गरेको कम्युनिष्ट सरकार ।
सुशासन विकास र समृद्धिको मुल मन्त्र फुक्दै मागिएको जनताको समर्थन ।
जनताले गरेको विश्वास र दिईएको शंकाको सुविधा ।
प्रधानमन्त्री जुन सुशासन र परिवर्तनको दुहाई दिईरहेका छन्, त्यसप्रतिको उनको पार्टीका संयन्त्र पटक्कै सहयोगी छैनन् ।, आजको नयाँ पत्रिकामा चुड्कीले आउँदैन सुशान शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
बिकास आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाएर राजनीतिक नेता तथा ठेकेदारले राष्ट्रि ढुकुटीको दोहन गर्दै आएका छन् ।
यस्तो दोहनको नमुना बनेको छ — सिक्टा सिँचाई आयोजना ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा २०६३ सालमा सुरु भएको सिक्टामा अहिलेसम्मको लगानी र निर्माण मुलुकका निम्ति सरासर धोका हो ।, आजको नागरिकदैनिकमा सिक्टामा लगानी बालुवामा पानी शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
ईतिहास एक दिन हरेकपल्ट आउँदैन । जहिले आउँछ, थाहै नपाई विगतलाई डामेर जान्छ ।
भविष्यका लागि कुनै कीर्ति राखेर ।
ईतिहास फुत्त उम्केर भविष्य बनिसक्छ जसलाई सपना देखाउनेहरु उपयुक्त शब्द खोजिरहन्छ । अमेरिकी नेता थोमस जेफरसनले कुनै बेला भनेका थिए, मलाई विगतको ईतिहासभन्दा भविष्यको सपना प्रिय लाग्छ ।, आजको कान्तिपुरदैनिकमा ईतिहासमा हरेक दिन शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
हालै मात्र सिसडोलस्थित फोहोर व्यवस्थापन स्थल जाने बाटो भत्किएपछि काठमाडौं उपत्यका महिनौँसम्म फोहोरको डंगुरभित्र रहन बाध्य भयो ।
अझै पनि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन भईसकेको छैन ।
अहिले फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने उपकरणसमेत भित्र्याईसकिएको, निजी क्षेत्रले समेत यसमा चासो देखाएको सन्दर्भमा अवब बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल्ड साईटलाई वैज्ञानिक ढंगले संरचित गरिनुपर्छ ।, आजको कारोवारदैनिकमा सहरी फोहोरको व्यवस्थापन शिर्षकमा सम्पदाकीय छापिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद खालि भएको ५ महिना बितिसकेको छ । सर्वोच्च अदालत ५ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । सरकारले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो नाम अनुमोदन हुन सकेको छैन । समितिका सदस्यहरुको भनाइ हेर्दा जोशीको नाममा सहमति होलाजस्तो पनि देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरिएको नामलाई दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी गम्भीर संकटमा पर्नुभएको छ ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदनमा किन ढिलाइ ? शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, फोरमबाट एक मन्त्री थपिने
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलबीच चित्त बुझाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने जानकारी दिए ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको नियुक्ति, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारकमन्त्रीको बढुवा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको शपथ एकैपटक हुने महासचिव पौडेलले बताए । विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण शेरबहादुर तामाङले कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालय खाली छ ।
‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई के दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर टुंगो लाग्ने गरी पार्टीभित्र छलफल हुनसकेको छैन ।’ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै टुंगो लगाउने पौडेलले बताए ।
फोरमबाट एक राज्यमन्त्री थपिने
संघीय समाजवादी फोरमबाट एक राज्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री अर्याललाई अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएपछि अब फोरमबाट राज्यमन्त्री थपिने भएको छ ।
फोरमलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो ।
फोरमबाट उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री र सहकारी विकास मन्त्रीमा मोहमद इस्तियाक राई छन् । एक राज्यमन्त्रीका लागि तीनजना नेता दौडधुपमा लागेको फोरमका एक नेताले बताए ।
राज्यमन्त्रीका लागि प्रमिला यादव, डा. सुरेन्द्र यादव र प्रदीप यादव लबिङमा लागेका छन् । फोरममा मधेसी समुदायबाट मन्त्री भइसकेकाले जनजाति समुदायबाट राज्यमन्त्री बनाइनुपर्ने दबाब छ ।
पुर्वीचौकी गाउँपालिका ५ काडामाडौं बालबालिकाको दुषित खोपका कारण ज्यान गएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
०६९ साल भदौ ३ गते डोटीको पुर्वीचौकी गाउँपालिका ५ साबिकको काडामाडौं गाविस मा दादुराको खोप लगाएपछि चारजना बालबालिकाको ज्यान गएको थियो ।
मृतक बालबालिकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश थिएको छ ।
खोपकै कारण ज्यान गुमाउने १९ महिनाकी गौरीका हजुरबुबा पुर्णबहादुर चिरालले ढिलै भए पनि अदालतले न्याय दिएको बताए ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
कानुनमन्त्रीमा ढकाल, पोखरेल र नेम्वाङको चर्चा
नेकपामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका लागि सांसदहरू भानुभक्त ढकाल, कृष्णभक्त पोखरेल र वसन्त नेम्वाङको नाम चर्चामा छ ।
उनीहरूमध्येबाटै एकजना मन्त्री हुने सम्भावना देखिएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
ढकाल, पोखरेल र नेम्वाङ तीनैजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । ढकाल मोरङ ३, पोखरेल चितवन २ र नेम्वाङ पाँचथरबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष जनजाति समुदायबाटै कानुनमन्त्रीमा बनाइनुपर्ने दबाब धेरै छ ।
तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा पढ्न गएका नेपाली महिला विद्यार्थीका विषयमा विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टी नेतृत्वले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएपछि तामाङले ८ साउनमा राजीनामा बुझाएका थिए ।,यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
सबै जिवजन्तु संरक्षित सूचीमा, चोरी शिकारी गरेमा यस्तो सजाय
काठमाडौं - सबै प्रकृतिका वन्यजन्तु अब संरक्षित सूचीमा सूचिकृत हुने भएका छन् । वन्यजन्तु सम्बन्धी नयाँ ऐनले मुलुकमा अभिलेख भएका सबै जिवजन्तुलाई संरक्षित सूचीमा सामेल गर्न लागेको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरेर नयाँ बन्ने ऐन मार्फत सबै जिवजन्तु संरक्षित सूचीमा सूचीकृत हुने भएका हुन् । विद्यमान ऐनमा विभिन्न २७ प्रजातीका स्तनधारी वन्यजन्तु, ९ प्रजातीका चरा र ३ प्रजातीका सरिसृप संरक्षित सूचीको अनुसूची १मा सूचिकृत छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म विभिन्न २ सय १२ प्रजातीका स्तनधारी वन्यजन्तु, ८ सय ८७ प्रजातीका चरा, १ सय ४० सरिसृप विभिन्न ५५ प्रजातीको उभयचर अभिलेख भएका छन् । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा वन्यजन्तुको वर्ग अनुसार ४ अनुसूचिमा विभाजन गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनको अनुसूची १मा विभिन्न १५ स्तनधारी जन्तु, ४० प्रजाती पन्छी र ४ प्रजाती सरिसृप छन् ।
विद्यमान ऐनमा हात्ति, गैडा, बाघ, हिउँचितुवा, कस्तुरी मृग लगायतका जन्तुको चोरी शिकारी गरेमा ५ देखि १५ वर्षसम्मको कैद वा ५ देखि १० लाख रुपियाँ जरिवाना र दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित नयाँ ऐनको अनुसूची २मा विभिन्न २५ स्तनधारी, ८१ चरा, ९ सरीसृप र माछाका ३ प्रजाती छन् । त्यसैगरी अनुसूची ३मा ३५ स्तनधारी, ४० चरा, सरिसृप १९, उभयचर ३, माछा ६ र किटपतंङ्गका १४ प्रजाती छन् । अनुसूची ४ मा बाँकी सबै प्रजाती सामेल गर्न सुझाइएको छ ।
किन घट्यो भारु नोट साट्नेको संख्या ?
काठमाडौं - भारत जाँदा भारतीय रुपैयाँ (भारु) नोटको बिटा बोक्ने चलनमा कमी आएसँगै त्यस्ता नोट साट्न बैंक धाउनेको संख्या घटेको छ ।
पछिल्लो समय नगद लिएर जाँदा चोरिने, हराउने र लुटिने क्रम बढेसँगै सर्वसाधारण नेपालीले एटिएम कार्ड बोक्न थाल्दा बैंकमा भारु नोट साट्नेको भिड घटेको हो । आजको नागरिकमा खबर छ ।
भारत जाँदा भारु नोटको सट्टा विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्ने चलन बढेपछि नगद लिन आउने क्रम घट्दै गएको राष्ट्र बैंक, बैंंकिङ कार्यालय, थापाथलीका कार्यकारी निर्देशक झलकशर्मा आचार्यले बताए ।
नेपालमा भारु साट्ने क्रम घटेसँगै राष्ट्र बैंकले भारु ल्याउन कम गरिसकेको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षमा आठ अर्ब रुपैयाँ बराबर भारु नोट ल्याउन योजना बनाएको थियो ।
तर, माग कम भएकाले ६ अर्ब रुपैयाँ बरारबरका भारु नोट मात्र ल्यएको कार्यकरी निर्देशक आचार्यले बताए ।
पाँच वर्षभित्र ठूला जहाज १७ पुर्‍याउने निगमको तयारी
नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १७ वटा जहाज पुर्‍याउने योजनासहित पाँचवर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
निगम कार्यकारी समितिले मंगलबार नेपाल एयरलाइन्समा ५ वर्षभित्र १० न्यारोबडी ए ३२०–२०० र ७ वाइडबडी ए ३३०–२०० जहाज पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।
यो योजना निगम सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएपछि कार्यान्वयनमा जाने निगममा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए । अहिले निगमसँग एक बोइङ ७५७, दुई न्यारोबडी ए ३२०–२०० र दुई वाइडबडी ए ३३०–२०० विमान छन् । करिब तीन दशक पुरानो बोइङ भने निगमले बेच्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
अबको पाँच वर्षभित्र थप आठ न्यारोबडी र पाँच वाइडबडी जहाज किन्ने निगमको योजना छ । ‘दुई वाइडबडी जहाज भित्रनु निगमको रणनीति परिवर्तनको पहिलो पाइला हो,’ महाप्रबन्धक कंसाकारले भने, ‘अब आक्रामक रुपमा अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।’यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
श्रेष्ठलाई फकाएर फर्काउने जिम्मा माधव नेपाललाई
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी नीतिविपरीत डा गोविन्द केसीलाई भेटेर नैतिक समर्थन जनाएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठसँग पछिल्लो सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले मौखिक स्पष्टीकरण लिएका थिए ।
श्रेष्ठले भने, अध्यक्षसँग सम्पर्क नै नहुने, बैठक र छलफलहरूमा पनि लामो समयसम्म कुराउने गरेकाले कार्यशैली ठीक नभएकाले आफूले प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिएको निकटस्थहरूलाई बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
स्रोतका अनुसार राजीनामापत्र फिर्ता नलिएपछि अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई श्रेष्ठलाई सम्झाएर पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काउने वातावरण निर्माणको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, केही दिनयता घाँटीको समस्याका कारण घरमै आराम गरिरहेका श्रेष्ठ भने शीर्ष नेताहरूसँग सम्पर्कमा नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजीले किन दिए पदबाट राजीनामा ?
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै उनले गत शनिबारको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
पार्टी नीतिविपरीत डा. गोविन्द केसीलाई भेटेर नैतिक समर्थन जनाएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठसँग पछिल्लो सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले मौखिक स्पष्टीकरण लिएका थिए । ‘पार्टीको जानकारीविना तपाईंले किन भेट्नुभो, कसको अनुमतिमा भेट्नुभो, सामाजिक सञ्जालमा भेटको प्रचार पनि गर्नुभएछ’ भन्दै बैठकमा ओलीले स्पष्टीकरण लिएका थिए ।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ‘पार्टीको जानकारीविना भेटेर गलत काम गरेको र उनको नाममा कांग्रेसको आन्दोलनलाई मलजल गरेको’ भन्दै ओलीको भनाइलाई समर्थन जनाएपछि श्रेष्ठले तत्काल राजीनामाको घोषणा गरेको सचिवालयका एक नेताले बताए ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौं - बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत छात्राको आचरणप्रति अमर्यादित टिप्पणी गर्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङप्रति सरकारको आधिकारीक धारणा नआए आन्दोलनमा उत्रने नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसन, बंगलादेशका विद्यार्थीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष नवीन यदवको नेतृत्वको टोलीले मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत छात्रामाथि अत्यन्त अमर्यादित, अशिष्ट, र अराजक टिप्पणी गरेकाले यसले आफूहरुलाई चोट पुगेको बताउँदै उनीहरुमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
आजको नागरिक दैनिकको पृष्ठ ८ मा यो समाचार छापिएको छ ।
अवकाश रोजेका ४ सय ६७ कर्मचारीबाट निवेदन फिर्ता
काठमाडौं - स्वैच्छिक अवकाश रोजेका ४ सय ६७ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशमा नजाने भन्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
निवेदन फिर्ता गर्नेमा सचिव डा. सरोज पोखरेल र सन्तु कोइरालासहित ६ सहसचिव, २२ उपसचिव, २५ शाखा अधिकृतले अवकाशका लागि दिएको निवेदन फिर्ता गरेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापिएको छ ।
सरकारले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई निवेदन फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि अहिलेसम्म ४ सय ६७ जना कर्मचारीले निवेदन दर्ता गराएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेज अधिकारीले जानकारी दिए ।
बिमा कसुरमा ३ सय गुणा जरिवाना वृद्धि, विधेयकको विरोध
काठमाडौं - सरकारले बिमासम्बन्धी कसुरको जरिवाना ३ सय गुणाभन्दा बढीले बढाउने प्रस्ताव गरेको समाचार आजको कारोबारमा छापिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा बिमाको कसुरअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको हो ।
विद्यमान बिमा ऐनमा अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम २ बर्षसम्म कैद सजायको मात्र व्यवस्था थियो ।
विज्ञसँग छलफल नगरी सरकारले एकतर्फी रुपमा विधेयक बनाएर पेश गरेको र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत दण्ड जरिवाना राखिएको भन्दै विरोध सुरु भइसकेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको सेयर आजदेखि
काठमाडौं - अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित दोलखावासीका लागि जारी गर्न लागेको २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बुधबार (आज) देखि संकलन सुरु हुँदैछ ।
पटक पटकको अवरोध र लामो समयदेखिको प्रतीक्षापछि स्थानीयका लागि सेयर संकलन सुरु हुन लागेको हो । आजको कारोबारमा खबर छ ।
दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित (दोलखावासी)ले बुधबारदेखि तोकिएको संकलन केन्द्रहरुबाट सेयर भर्न पाउनेछन् ।
दोलखावासीलाई सेयर निष्कासनपछि सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन हुनेछ ।
स्थानीय तहमा बजेट हिनामिना, कर्मचारीबाट १ अर्ब असुल्न निर्देशन
काठमाडौं - स्थानीय तहमा पठाइएको अर्बौं रुपैयाँ बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीले मिलेमतोमै हिनामिना गरेको समाचार आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ ।
यो हिनामिना हजार, लाख वा करोडमा मात्रै सीमित छैन । ७ सय ५३ स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले १ बर्षमा आठ अर्बभन्दा बढी अनियामितता र गैरकानुनी रुपमा खर्च गरेका छन् ।
महालेखाले अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही र हिनामिना गर्ने कर्मचारी तथा स्थानीय तहका पादाधिकारीबाट करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्थानीय तहमा गएको बजेट भ्रष्टाचारमा छानविन भइरहेको जनाएको छ ।
यसरी भयो एकै रात तीनजनाको हत्या
राजविराज - सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाअन्तर्गत पर्छ मुसहरनियाँ गाउँ, मुख्य बजार क्षेत्रबाट झन्डै ५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा ।
पक्की सडक नभए पनि सदरमुकाम क्षेत्रसँग सहज आवतजावत हुन सक्ने गाउँ हो यो । गत जेठ २६ गते राति यसै गाउँका सुरज भनिने सूर्यनारायण साह, उनकी पत्नी र पाँच वर्षीया छोरीको सामूहिक हत्या भयो । घटना भएको डेढ महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ तर सूर्यनारायण र छोरी प्रतिभाको शव अझै भेटिएको छैन । सूर्यनारायणका भाइ र बुहारीसहित १० जनाजतिको संलग्नतामा उक्त घटना गराइएको प्रहरीको अनुमान छ । तीमध्ये पाँचजना अभियुक्त पक्राउ परेका छन् भने बाँकी फरार छन् । आजको नागरिकको पृष्ठ ३ म यो समाचार छापिएको छ ।
अभियुक्तले प्रहरीसमक्ष दिएको प्रारम्भिक बयानअनुसार दाजुभाइबीचको पारिवारिक झगडा तथा अंश विवादका कारण सूर्यनारायण, पत्नी बेचनी र छोरी प्रतिभाको सामूहिक हत्या भएको हो ।
जेठ २६ गते साँझ गाउँकै हटियाछेउको बाँसघारीनजिक प्रमिलाबाहेक पक्राउ परेका धर्मेन्द्र साह, सत्यनारायण साह र थापा भनिने जिवछ साह तथा फरार रहेका अभियुक्त पूर्वनियोजित रुपमा रक्सी सेवन गर्न बसेका थिए । उनीहरुले छोरीसहित हटियातिर हिँडेका सूर्यनारायणलाई पनि रक्सी खान बोलाए ।
पूर्वयोजनाअनुरुप अभियुक्तले थोरैथोरै खाए भने सूर्यनारायणलाई थपीथपी खुवाए । अँध्यारो गाढा भएपछि रक्सिको नशामा लट्ठिएका सूर्यनारायणको घाँटी थिचेर हत्या गरियो त्यसपछि छोरी प्रतिभाको पनि हत्या गरियो । दुवैका शवलाई बोरामा बाँधेर नहरको साइफनभित्र गाडिदिए अभियुक्तहरु घर फर्के । त्यति बेला रातिको करिब ९ बज्दै थियो । सूर्यनारायणकी चार महिनाको गर्भवती पत्नी बेचनी घरमा सुतिरहेकी थिइन् ।
एकैचोटि उनीमाथि आक्रमण भयो । उनको पनि घाँटी थिचेर हत्या गरियो । सुरुमा बेचनीको शव पनि साइफनभित्रै गाड्ने योजना थियो तर गाउँबाट झन्डै दुई किलोमिटर टाढा रहेकोले आँगनमै रहेको शौचालयको सेफ्टी ट्यांकीभित्र बेचनीको शव फालियो । सेफ्टीट्यांकीभित्र फालिएको शकुहिएर गनाउन थालेपछि गाउँलेहरुले जेठ ३१ गते राति प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि मात्र उक्त हत्याकाण्डको रहस्य खुलेको थियो ।
चलचित्र 'हिम्मतवाली'का नायक सुदर्शन पनि मानव तस्करीमा !
नेपाली चलचित्र हिम्मतवालीका नायक सुदर्शन गौतम वर्षौंदेखि मानव तस्करीमा संलग्न रहेको खुलेको छ ।
अमेरिकी सामुद्रिक मार्ग पाभोमा अड्किएको पानीजहाजमा १८ दिन अलपत्र परी नेपाल फर्किएका बाँके कोहलपुरका जसोदा चन्द र पुष्प चन्दको जाहेरीपछि थापा मानव तस्करीमा संलग्न रहेको खुलेको हो ।
उनीहरूसँगै अमेरिका जान लागेकी भक्तपुरकी सुमित्रा कुँवरको भने जहाजमै मृत्यु भएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार हाइटीस्थित पोर्ट अफ वेबाट समुद्री बाटो हुँदै अमेरिका छिर्न लागेका उनीहरू सवार पानीजहाज पाभोस्थित समुद्रमा बिग्रिएको थियो ।
जहाजमा उनीहरूसहित भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट लगिएका १५ युवती सवार थिए । जहाज अड्किएको १४ दिनपछि सुमित्राको स्वास्थ्य बिग्रिएको थियो ।,यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छ ।
कलाकार बनाएर मानव तस्करी
प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई नेपालबाट विभिन्न रुट हुँदै हाइटीसम्म बाग्लुङका सागर श्रीश, म्याग्दीका लेकबहादुर पुन, ओखलढुंगाका अनिल बानियाँ र बाँकेका सुरज काफ्लेले पु-याएका थिए । त्यसपछि अमेरिका लैजाने जिम्मा भने गौतमले लिएका थिए ।
उनीहरूलाई संस्कार नामक चलचित्रका कलाकार तथा प्राविधिक बनाएर अमेरिका लगिँदै थियो । त्यसमध्ये सागर, लेकबहादुर, अनिल र सुरजलाई भने महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पक्राउ गरिसकेको छ ।
महाशाखाका प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले मानव तस्करीमा हिम्मतवाली चलचित्रका नायक सुदर्शन गौतमको संलग्नता देखिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले केहीलाई पक्राउ गरेका छौँ । केही निगरानीमा छन् । उनीहरूको बयान सुन्दा सुदर्शन गौतमको पनि संलग्नता देखिन्छ । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
प्रमाणपत्र नै जोशीविरुद्ध प्रमाणः कक्षा १० मा दुई विषयमा फेल !
संसदीय सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक सर्टिफिकेटदेखि जन्ममितिसम्म विवादास्पद भेटिएको छ ।
समिति स्रोतले दिएको गोप्य डकुमेन्टअनुसार जोशीले विजय मेमोरियल स्कुलबाट ०२७ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट जोशीले ०२९ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएकोसमेत प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।
समितिमा जोशीले आफूले विजय मेमोरियल स्कुलमा १० कक्षा पढेको र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएको बताएका छन् । ‘०२७ मा विजय मेमोरियल स्कुलबाट एसएलसी अर्थात् त्यसवेला भनिने प्रवेशिका परीक्षा दिएको प्रमाण भेटिएको छ । उनको सिम्बोल नम्बर १२५८ बी हो,’ समिति स्रोतले भन्यो ।
त्रिविको नेपाल ल क्याम्पसमा जोशीले बुझाएको प्रोगेस रिपोर्टमा विजय मेमोरियल स्कुलबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएको र त्यतिवेलाको सिम्बोल नम्बर ३६६७ भनिएको छ । उनकै अर्को शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट ३६६७ सिम्बोल नम्बरमा प्रवेशिका परीक्षा दिएको उल्लेख छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
गाउँपालिकाले सिफारिस नदिँदा शिक्षाबाट वञ्चित
६५ वर्षीय हजुरबुवाबाट पाँच वर्षिय बालिका बलात्कृत
सल्यानको बाँफुखोलाबाट भारतको सिम्लासम्म बस संचालन हुने
आलुको बोराभित्र ९ करोडको सुन
मोडल लक्ष्मि देवकोटा बनिन् छोटो समयमै चर्चित